नेपालि क्रिकेट खेलाडीको लागि खुसीको खबर, रंगशाला निर्माणमा विनोद चौधरीले गर्दैछन यस्तो कार्य !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
नेपालि क्रिकेट खेलाडीको लागि खुसीको खबर, रंगशाला निर्माणमा विनोद चौधरीले गर्दैछन यस्तो कार्य !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, चैत्र ८, २०७४
काठमाडौं – नेपालमा अत्याधुनिक खेल मैदान निर्माणमा नेपालका अर्बपति विनोद चौधरीले चाँसो दिएका छन् । नेपाली क्रिकेट टोलीले एकदिवशीय क्रिकेट मान्यता पाएसँगै क्रिकेट रंगशाला निर्माणको आवाज व्यापक रुपमा उठिरहेको छ ।
सरकारले बनाउन नसके नीजि क्षेत्रले भएपनि क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्नुपर्ने चर्चा चलिरहेका बेला चौधरीले चाँसो दिएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यसको संकेत गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले पोष्ट गरेका पछिल्ला २ अपडेटमा क्रिकेट मैदान निर्माणमा निकै चाँसो देखिएको छ । उनले बिहीबार बिहान र बुधबारगरी दुई स्टाटस अपडेट गरेका छन् । जसमा क्रिकेट मैदान निर्माणकाबारेमा जानकारी दिएका छन् ।
आज पोष्ट गरेको स्टाटसमा भनेका छन्, ‘हामीले सरकारसँगको सहकार्य (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मा क्रिकेट रंगशाला बनाउने भनेका थियौँ । त्यसका लागि तत्कालीन खेलकुदमन्त्री र सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारीहरूसँग दशौँ चरणका बैठक भए । तर, सरकारले रंगशालाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हाम्रो चाहना अगाडि बढ्न सकेन ।‬’
त्यस्तै बुधबार पोष्ट गरिएको स्टाटसमा भनिएको छ, ‘क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि तपाईंहरूले देखाउनुभएको चासो र निरन्तरको पहलकदमीका लागि आभार व्यक्त गर्दछु ।
म आफैंले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमै रंगशाला निर्माणका लागि बोलेको थिएँ । रंगशालाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र पूर्वाधारका लागि राज्यलाई दबाब दिन अब तपाईंहरूको साथ आवश्यक छ । निजी-सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रंगशाला बनाउन सकिने मेरो विश्वास छ । अथवा त्रिवि खेल मैदानलाई पनि पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसका लागि तपाईंहरूले राज्यलाई दबाब दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।’
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान नहुँदा नेपाली खेलाडीले निके समस्या खेप्नुपरेको छ । नेपालले एकदिवशीय मान्यता पाएसँगै यसको माग व्यापक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका धुर्मुस सुन्तलीलाई क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न दबाव दिईरहेका छन् । यद्यपी यस विषयमा धुर्मुस सुन्तलीले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सरकारले समेत अब चाँडै क्रिकेट मैदान निर्माण बनाउने जनाउँदै आएको छ ।
रा.खे.प. र किरात राई खेलकुद संघलाई प्रतियोगिताको नाममा कहिले सम्म झुक्याउने ?
मुड्की जुधाउँदै दुई कराँते महासंघ एक ठाउँमा
चीनलाई ५ रनले पराजित गर्दै नेपालले गर्यो कमाल
महिला विश्वकप छनोट : हङकङमाथि नेपालको सानदार जित
महिला हिरो गोल्डकप : नेपाली टोलीको सानदार जित
करातेमा आँखा लगाउने धुन्दुकारीहरूलाई खेलाडीले नछाड्ने , राखेप भित्रै विरोध कार्यक्रम